Laba shey oo iskujira Naqshad Dahab Dahab Lapel Pin Marathon Bilad Badge Deji
Cabir: qiyaastii 8cm
Gadaal: ciid-lagu qarxiyay calaamadda shaabadaysan + 1 dhabar taageero
Acc.: Balanbaalis xajin / xajin caag ah
Baakadaha: bacda poly / sanduuqa hadiyadda / kaarka taakuleynta
Habka farsamada: wax taaj oo kale, dhinto ridaya, qiraan, dahaadhay, midabaynta, QC, shirkii, baakadaha.
Farshaxanimada: dhaldhalaalka jilicsan, laba qaybood oo laysku daray
Midabka dhaldhalaalka jilicsan ayaa ka hooseeya khadadka birta ah ee ku wareegsan, dusha sare wuxuu leeyahay dareen macdan xoog leh oo taabasho ah.
Biin dhaldhalaalka jilicsan ayaa lagu dhajin karaa midab bir ah ama lagu rinjiyeyn karaa midabada Pantone.
Dahaadhida iyo dhimashadaba waa laga sii hormariyaa ku darista midabada dhaldhalaalka jilicsan.
Dhaldhalaalka jilicsan ayaa ah mid la awoodi karo oo ku habboon inta badan calaamadaha biinanka, qadaadiicda, billadaha, furaha furayaasha, tags, shaashadda iyo waxyaabaha kale ee birta ah.
Biinanka dhaldhalaalka jilicsan ee khaaska ah:
sidoo kale loo yaqaan 'biinanka dhaldhalaalka dhaldhalaalka ah', waa kuwo tayo leh oo lagu dhuftay calaamado bir ah oo lagu buuxiyay gacan midab leh. Maxaa kala saara biinanka dhaldhalaalka jilicsan waa meesha dhaldhalaalka jilicsan ee jilicsan ee jilicsan ay ka hooseysaa meelaha biraha koray ee ku xeeran.
Biinanka dhaldhalaalka jilicsan ayaa ku habboon munaasabado kala duwan, laga soo bilaabo aqoonsiga shirkadaha iyo xusuusta meelaha laga tago aqoonsiga shaqaalaha iyo biinanka ganacsiga ee kooxda, gaar ahaan haddii aad leedahay naqshad fudud ama dhexdhexaad dhexdhexaad ah.
Biinanka dhaldhalaalka adag ee khaaska ah:
Mararka qaarkood waxaa loo yaqaan biinanka epola, biinanka cloisonné biinanka ama biinanka lagu dhuftay dhaldhalaalka adag, waa nooc ka mid ah farsamooyinka farsamooyinka loogu talagalay calaamadaha biinanka. Biinanka dhaldhalaalka adag way u siman yihiin taabashada midab baa lagu buuxiyaa iyadoo la isticmaalayo midabada PMS waana la dubay ilaa dhaldhalaalka laga bogsado. Meelaha birta ah ee la kiciyey iyo midabada waa isku heer ka dibna gacmaha oo si fiican loo safeeyey ka dibna lagu dahaadhay dahab, qalin ama naxaas.
Biinanka dhaldhalaalka adag ayaa leh muuqaal waara oo waara. Waxay leeyihiin qiime aad u sarreeya oo la dareemayo sababtoo ah midabbada muuqda, kuwaas oo ah xulashada ugu fiican ee musmaarrada dhacdooyinka, biinanka shirarka, biinanka isbahaysiga, biinanka sorority, biinanka siyaasadeed iyo biinanka shirkadaha.
Hore: Dahaarka Dahaarka Dahaarka Dahaarka ah ee Dahaarka Dahaarka ah Dahaarka Dahaarka Calanka Qaranka Lapel Pin
Xiga: Calanka Birta Calanka Lapel Pin Badge Deji Dheemanka Trophy dhinta Billad Dahab ah oo Dahab ah
Qiimo jaban Custom Enamel
Calaamadaha Cute Pin
Dragon dhaldhalaalka Pin
Dhaldhalaalka Pin Kan sameeyey
Dhaldhalaalka dhaldhalaalka dhaldhalaalka
Farsamooyinka Birta Dahabka Lapel Pin Custom Custom Desig ...
Enamel Pin Soosaarayaasha Custom Sameeyay HK Global ...
Soosaarayaasha caadada moodada adag dhaldhalaalka ...
Dhaldhalaalka Custom Pin Afar Leaf Clover jilicsan dhaldhalaalka ...